Company Isi - Hangzhou Ehase-Flex Co., Ltd.
Ehase-Flex ụlọ ọrụ dị na Hangzhou, nso Shanghai na Ningbo n'ọdụ ụgbọ mmiri, na ihe karịrị 40 afọ ahụmahụ, bụ otu n'ime ndị kasị ama ụdị na metal mgbanwe nkwonkwo na mmụba nkwonkwo na Taiwan. Anyị na-pụrụ iche na-n'ichepụta mgbanwe nkwonkwo, mmụba na nkwonkwo, mgbanwe sprinkler sooks, mgbanwe tube, gas njikọ, roba nkwonkwo na spring efego. Anyị ụlọ ọrụ ahụ nwetara àgwà akara usoro ISO9001. Anyị na ngwaahịa na-FM, Mankeumman, CCC, CSA, SGS mma na 100% na-anwale tupu nnyefe. Na elu àgwà anyị na ngwaahịa na-ọtụtụ-eji ọtụtụ ubi ndị dị otú ahụ dị ka mmanụ ala, chemical, okporo ọkụ, ngwá electronic, ígwè, electric ike, ụgbọ mmiri ụlọ, nuclear ume, na wee nwee ukwuu ghọtara n'etiti ahịa ma anụ ụlọ na esenidụt. Anyị nwere ahịa dị otú ahụ dị ka Samsung, LG, MIXC ahịa, Hyatt hotel, Marriott Hotel.
Anyị nwere onwe anyị ọkachamara na-eme nnyocha, na-emepe emepe otu na equipments, nwere ike chepụta na Nlụpụta dị ka ndị ahịa 'chọrọ. Anyị ọdịda anọ nchọpụta Kemịkalụ.
Na elu technology na equipments, anyị nwere nnukwu na-amị ike na-adọ nnyefe. Anyị mgbe-sales nkwa na-aza n'ime 4 awa na ruo saịtị n'ime 48 awa maka anụ ụlọ ọrụ, na-emeghachi omume n'ime 6 awa maka esenidụt ọrụ.
N'ihi na ihe karịrị afọ 40, anyị na-e akanamde na-amị kacha mma mma, nwee ezi uche price ngwaahịa na-enye ọkachamara ahịa ọrụ. Anyị echiche bụ "àgwà aka, kaadị guzo paramount". Anyị n'anabata ndị ahịa n'ụlọ na mba ọzọ na jụrụ ase nleta.
Anti ọma jijiji Spring mounts , Spring Nweghị mounts , Axial Expansion Bellows, U udi Akwụ ụgwọ , Mgbanwe Sprinkler dropper , Flexible Bellows,